Ahoana no fomba hamoronana rindran-damina dofollow amin'ny fomba tsara?
Zava-dehibe ho an'ny orinasa any amin'ny Internet. Webmasters dia tena manahy ny hiverenana rohy mankany amin'ny tranonkalany, satria afaka manampy ny SEO sy manangana ny tranonkala. Amin'ity hazavana farany amin'ny fanavaozana Google farany ity, tomponà tranonkala dia matahotra ny mamorona rindranasa madinika toy ny ahafahana miteraka latsa-bato sy sesintany Google hafa. Izany no mahatonga ireo webmasters rehetra hitady loharanom-baovaon'ny PR mba hananganana backlinks amin'izy ireo. Ny isan'ireo loharanon-tranonkala maimaim-poana dia voafetra, ary sarotra ny mahazo fahazoan-dàlana hanangana azy ireo. Na izany aza, raha tsy vitan'ny orinasanao ny mametraka fifandraisana ara-barotra amin'ny tranokalan'ny PR, dia tsy antony tokony hampidirana teknika fitambaranà spammy. Raha tokony ho izany dia tokony hikaroka fomba hafa mahomby kokoa hanaovana backlinks PR. Hodinihintsika ato amin'ity lahatsoratra ity ny fomba hahazoana rindran-damina amin'ny tranokala PR10 Wikipedia. 1)
Nandritra ny taona maro dia nanjary olana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny mpividy ny Wikipedia satria saika tsy azo ovaina io loharano io ao amin'ny Google. Na izany aza, ity mpifaninana maharitra mandrakizay ity dia mety hitondra tombontsoa ho an'ny orinasanao amin'ny endriky ny rohy mahazatra. Ny Wikipedia dia azo ampiasaina amin'ny mpandraharaha amin'ny votoaty mba hanampy amin'ny fanatsarana ny môtô sy ny fandraisana anjara amin'ny iraka avy amin'ny loharanom-pampianarana lehibe indrindra manerantany.
Ny olona dia matetika no tsy mahatakatra ny andraikitry ny backlinks amin'ny Wikipedia. Ny ankamaroan'izy ireo dia mihevitra fa ampy ny mampifandray ny rohy mankany amin'ny "rohy ivelany" raha toa ka mifanaraka amin'ny sehatry ny tranonkala ny votoaty. Na izany aza, raha ny zava-misy dia tsy misy vokany mihitsy izany. Raha manana fomba mahomby hampidirana rakitra ho an'ny Wikipedia ianao, dia hitondra vokatra tsara ho anao izany. Mifanohitra amin'izany, mety miteraka olana maro izany, anisan'izany ny fananana ny sehatra misy anao fanampiny ho toy ny spam ary voarara ao amin'ny Wikipedia.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hizara aminareo fomba fanao tsara indrindra amin'ny Wikipedia backlinks aho. Noho izany, raha vita tsara, dia mbola mety ho tombony lehibe ho an'ny fanatsarana ny tranokalan'ny fikarohana.
Ahoana no niovan'ny backlinks tao Wikipedia nandritra ny folo taona lasa?
Wikipedia dia natomboka tamin'ny taona 2001 ho loharanom-panabeazana lehibe indrindra eran-tany. Tamin'izany fotoana izany dia tsy nahafaly ny fampividy ny akanjo sy ny teknika fananganana spammy hafa. Izany no antony nanomezana alalana ny tsirairay hamorona backlinks dofollow ao amin'ny Wikipedia. Na izany aza, noho ny fampiasan-danja goavana an'i Google sy ny rindran-damosin'i Google, ireo mpampiasa tranonkala dia nanatsara ny vokatra SEO. Nanomboka tamin'io fotoana io, Wikipedia dia nanova toe-tsaina iray hanamboarana rakitsary dofollow ao amin'ny pejiny. Mba hisakanana ny fanitsakitsahana spam-be sy ny fanitsakitsahana ny fitsipika Google, Wikipedia dia mamela ny fametrahana ny rohy nofollow izay tsy mamela afa-tsy sira fifandraisana. Ankoatra izany, Wikipedia dia mamorona rakitra iray miaraka amin'ny tanjona iray hanakanana ireo domains izay heverina ho spam.
Na dia tsy dia misy fiantraikany amin'ny SEO aza ny rindran-damina nofolowa noho ny dofollow, ny backlinks Wikipedia dia mbola sasantsasany amin'ny demaokrasia indrindra amin'ny tsena dizitaly. Azonao hazavaina amin'ny PageRank avo indrindra amin'ity loharano ity sy ny fihetsik'i Google mety amin'ny rohy avy amin'ity loharano ity Source .